लेक लाग्ने समस्या न्यूनीकरणमा हिमालयन उद्धार संघ-Setoghar
नरेन्द्रदेव भट्टऽ अध्यक्ष हिमालयन उद्दार स‌घ
वैतडीमा जन्मिएका नरेन्द्रदेव भट्ट सन् १९७७ देखि पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न भएका हुन् । हाल हिमालयन उद्धार संघका अध्यक्ष समेत रहेका उनले अध्ययनको हिसाबले अधिवक्ता भएपनि पर्यटन तर्फको उचिले भने उनलाई पर्यटन व्यवसायी बनायो । व्यवसायमा संलग्न रहेपछि अहिले सम्म पर्यटन क्षेत्रमा नै उनी परिचित छन् ।
कस्तो संस्था हो हिमालयन उद्धार संघ ?
सन् १९९३ मा स्थापना भएको यस हिमालयन उद्धार संघले नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि विशेष पहल गर्दै आएको छ । यस संस्थाले पर्यटकहरुलाई उच्च क्षेत्रमा जाने क्रममा आउन सक्ने लेक लाग्ने समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छल भन्नेमा रहेर विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । मनाङ र फेरिचेमा यस संस्थाले हेल्थ पोष्ट सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती हेल्थ पोष्टबाट बार्षिक करिब ४ हजार व्यक्तिहरुको उपचार हुँदै आएको छ ।
यसैगरी एभरेष्ट वेस क्याम्पमा पाल स्थापना गरी त्यहाँ पनि सेवा प्रदान गर्ने काम यस संस्थाले गर्दै आएको छ । विशेष गरी स्प्रिङ सिजन (जुन समयमा एक्सपेण्डिचरको लागि विदेशी पर्यटकहरु नेपालमा आउने गर्छन्)मा विदेशी एवं नेपाली पर्यटकहरुलाई आपत्कालिन सेवाहरु उपलब्ध गराउने काम समेत गर्दै आएका छौं ।
अहिले यस संस्थामा विभिन्न देशका स्वयम्सेवी डाक्टरहरुले नेपालको उच्च भागमा बसेर सेवा प्रदान गर्ने एवं हाइ अल्टिच्युड सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुभव गर्ने र विरामीको उपचार गर्ने लगायतका कामहरु समेत गर्छन् ।
मनाङमा हामीले स्थानीय जनताको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छौं ।
हाल यस संस्थामा करिब ३६ सदस्यहरु छन् । यो व्यावसायिक नभई सामाजिक संस्था हो । यस संस्थामा सबै किसिमका सामाजिक भावका व्यक्ति संलग्न हुन सक्छन् । हामीले संस्थाबाट व्यवसायिक लाभ भन्दा पनि सेवामूलक कामलाई नै बढी जोड दिएका छौं ।
विगतमा यस संस्थालाई सम्हाल्नुभएका अध्यक्ष ज्यूहरुको सक्रियताकै कारण अहिले यो संस्था यो अवस्थामा पुगेको हो । विगतमा संस्था शुरुवात गर्दा संस्थाले आफ्नो कुनै ठाऊँ नभएको कारण चौंरी गोठमा बसेर सेवा प्रदान गरेको थियो । पछि विस्तारै हामीले सेवा प्रदान गर्ने कार्य देखेको कारण बाहिरबाट सहयोग उपलब्ध गराएको कारण हामीले थप स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हामीलाई थप सहज भयो ।
हामीले अहिलेको कार्यकालमा केही ऐतिहासिक कामहरु सम्पन्न गरेका छौं । विभिन्न गाह्राअप्ठ्यारा प्रक्रिया पार गरेर हामीले पर्यटन विभागबाट स्वीकृति, स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल, श्रम विभाग लगायतका निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका कामहरुमा सरलीकरण गर्ने काम यस कार्यकालमा भएको छ ।
उच्च क्षेत्रमा जाँदा आउन सक्ने समस्याको बारेमा पहिले जानकारी दिन नसकेको कारण विभिन्न समस्याहरु सृजना हुने कुरालाई लक्षित गरेर हामीले अहिले हाइ अल्टिच्युड सम्बन्धी विभिन्न कामहरु अघी बढाएका छौं । काठमाडौं बस्ने अध्ययन तथा विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न युवाहरु कुनै जानकारी बिना नै मनाङको उच्च क्षेत्रमा मोटरसाइकलबाट जाने क्रम बढेपछि उनीहरुलाई लेक लाग्ने समस्या सृजना भएको कुरालाई लक्षित गरेर हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका हौं ।
उच्च क्षेत्रको यात्रा गर्ने क्रममा लेक लाग्ने समस्या पनि एक ठूलो समस्याको रुपमा देखिँदै आएको छ । यस समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले समय–समयमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु समेत हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौं ।
कतिपय पर्यटकहरु विदेशबाट नेपालमा आएपश्चात् कुनै पनि जानकारी नराखी मनाङ एभरेष्ट वेस क्याम्प लगायतमा जाने क्रममा विभिन्न समस्या सृजना हुने गर्छ । यस कुरालाई कम गर्ने उद्धेश्यले ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरु टे«ेकिङ पर्मिटको समयमा र लुक्ला उडान गर्ने पर्यटकहरुलाई उडानको समयमा हामीले लेक लाग्ने समस्या सम्बन्धी पम्प्लेट वितरण गरी सुसुचित गराउँदै आएका छौं । यसले गर्दा लक्षणको आधारमा लेक लागेको समस्या सम्बन्धित व्यक्तिले थाहा पाउन र त्यसबाट आफूलाई सुरक्षित बनाउनमा विशेष सहयोग पुग्छ । यसको अलावा अन्य समस्या न्यूनीकरणको लागि समेत अहिले यस्ता सूचनाहरुले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
हामीले विदेशी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी लेक लाग्ने समस्या सम्बन्धी विभिन्न जानकारी नेपाल एयरलायन्स अन्तरगतको इन्फ्लाइट म्यागजिनबाट समेत सुसुचित गर्दै आएका छौं । यसैगरी नेपाल एयरपोर्टमा नेपाल पर्यटन बोर्डको काउन्टर सँगै हामीले पनि काउन्टर राखेर यो सेवा प्रदान गरिरहेका छौं ।
उद्धारको लागि पहल ः
हामीले अहिले हिमालयन क्षेत्रमा हुने घटनाको लागि उद्धारको लागि भने काम गरेका छैनौं । विगतमा हिमालयन क्षेत्रमा उद्धारको क्रममा विभिन्न गलत तथ्याङक देखाउने काम समेत भएको थियो । सोही बमोजिम हामीले पनि उद्धार संघको तर्फबाट हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने काम गर्न तयार हुँदैनौं । हामीले विरामीलाई उपचार भने गर्दै आएका छौं ।
हामीले कुनै विरामीलाई उपचारको लागि काम गरेपश्चात् उक्त विरामी कुन टे«किङ कम्पनीबाट गएको हो, सो कम्पनीलाई जानकारी गराउने काम गर्दै आएका छौं । तर कतिपय अवस्थामा पर्यटक बिना कुनै गाइड कुनै टे«किङ कम्पनीको सम्पर्कमा नै नआई सिधै टे«किङमा जाने गरेका पनि पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको उद्धार कार्य निकै नै गाह्रो पर्ने समेत गर्छ । एकपटक फिलिपिन्सका व्यक्ति नेपालमा आउँदा यस्तै घटना भयो । उनी निकै सिकिस्त थिए । उनलाई करिब डेढ महिना नर्भिक अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि अवस्था कमजोर नै थियो । जसलाई पछि भने ठीक भयो । अहिले आफूले दोस्रो जीवन पाएको भन्दै हामीलाई विशेष आभार प्रकट गरे ।
यद्यपि हामी हेलिकप्टर उद्धार विकृतिको विरुद्धमा छौं । हामीले यस सम्बन्धमा भएका विकृति न्यून गर्न नेपाल सरकारले तयार गरेको कार्यदल बैठकमा सदस्यको रुपमा जाने क्रममा विभिन्न विषयमा आवाज उठाइयो । कार्यदललाई प्रभावकारी बनाउने र सक्रिय बनाउनको लागि हामीले विभिन्न कामहरु गरिरहेका छौं । अहिले यस क्षेत्रमा हुने विरामी एवं उद्धारका कार्यहरु र उद्धारको निम्ति भएको खर्च बारेमा धेरै हद सम्म सुधार आएको अवस्था छ ।
पर्यटन विभागले नेपालमा उद्धारको निम्ति अहिले सम्म यस कार्यको निम्ति स्वीकृति दिएको छैन । जुन पर्यटन विभागको कार्यक्षेत्र भित्र मात्रै पर्दैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, पर्यटन विभाग लगायतका संस्थाले यस्ता काम अघी बढाउन विशेष पहल अघी बढाउन जरुरी छ ।
किन स्थापना भएको छैन उद्धारमूलक संस्था ?
हवाई उद्धार कार्य आफैंमा जटिल र खर्चिलो काम हो । यसको लागि आवश्यक मापदण्ड अहिले सम्म नेपालमा बनाउन सकिएको छैन । साथै राज्यले समेत यस कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सोही बमोजिम पहल नभएको कारण यो कार्य अहिले सम्म हुन नसकेको हो । अहिले सम्म उद्धारको काम निजी कम्पनीबाट नै हुँदै आएको भएपनि उक्त रकम सम्बन्धित पर्यटकको वीमा गर्ने कम्पनीले नै तिर्ने हो ।
नेपाली वीमा कम्पनीहरुले यस्ता ठूला घटनाको वीमा गर्न अहिले सम्म तयार समेत नभएको कारण नेपालमा यस्ता प्रयाश हुन नसकेका हुन् ।
नेपालको हिमाली क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश अब हामीले अन्तराष्ट्रिय जगतमा फैलाउनु जरुरी छ । विगतमा भएका गलत कामहरु अब हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि फैलाउनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा जानुपूर्व सजग बन्न सके यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।